Jawaabo Kulul Oo Laga Bixiyey Hadalo Ka Soo Yeedhay Madaxweyne Trump | Baligubadlemedia.com
Jawaabo Kulul Oo Laga Bixiyey Hadalo Ka Soo Yeedhay Madaxweyne Trump
July 16, 2019 - Written by admin
Jawaabo Kulul Oo Laga Bixiyey Hadalo Ka Soo Yeedhay Madaxweynaha Maraykanka
Waxaa wali socota cambaareynta loo jeedinayo madaxwayne Donold Trump ka dib markii uu weerar dhanka afka ah ku qaaday 4 haween ah oo ka tirsan aqalka Kongreska Mareykanka.
Koox haween ah oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa si carol eh uga jawaabay ka dib markii uu madaxwayne Trump uu sheegay in afartan xubnood ay tahay in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen.
Madaxweyne Trump ayaa lagu dhaliilayaa cunsurinimo
Sidoo kale Ilhaan Cumar oo kusoo jawaabtay Twitter-keeda ayaa eedeyn culus u jeedisay madaxweynaha, iyadoo sheegtay “inay u dhaarteen sidii ay ula dagaallami lahaayeen madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan ee abid soo maray Mareykanka”.
Afarta haween ee la rumaysan yahay in uu madaxwayne Trump hadalkisa ula jeeday ayaa dhamaantooda loo doortay aqalka koongreska doorashadii xilliga dhexe ee dhawaan Mareykanka ka dhacday.
Siyaasadooda u janjeerta dhanka bidix ayaa sababtay in ay isku dhacaan Nancy Pelosi – gaar ahaan arrinta siyaasadaha socdaalka.
Mid ka mid ah haweenkaasi waa Ilhan Omar – oo ku dhalatay dalka Soomaaliya islamarkana tagtay Mareykanka iyada oo aad u da’yar.
Saddex haween ayaa kala ah Rashida Tlaib, Ayanna Pressley Alexandria iyo Ocasio-Cortez .
Saddex qoraal oo uu shalay Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu haweenka ka tirsan Congress-ka ugu eedeeyay inay haweenkan “si joogto ah” u dhaliilaan isaga iyo waddanka Mareykankaba.